4 Ezigbo Ndụmọdụ Maka Optchọcha Ihe Onyonyo Gị | Martech Zone
Tupu anyị gwuo ụfọdụ ndụmọdụ maka ị nweta akụ dijitalụ, hapụ ịnwale ọchụchọ Google nke anyị. Ka anyi mee nyocha onyonyo na otu n'ime edemede kacha asọmpi na ịntanetị - ụmụ nkịta mara mma. Kedu otu Google nwere ike isi bulie ibe ya? Kedu otu algorithm si mara ihe mara mma?
Nke a bụ ihe Peter Linsley, Onye njikwa ngwaahịa na Google, ga-ekwu banyere ọchụchọ onyonyo Google:
Anyị ozi na Nchọta foto Google bụ ịhazi ihe oyiyi ụwa… Anyị na-etinye uche nke ukwuu na afọ ojuju ndị ọrụ njedebe. Yabụ mgbe ha jiri ajụjụ, ha nwekwara onyonyo ha na-achọ, ebumnuche anyị bụ ịnye onyonyo dị mkpa ma baa uru maka ajụjụ a.
Ma ị na-achọ ịkekọrịta ozi ụlọ ọrụ na-enye aka, ihe osise na-atọ ọchị ma ọ bụ ihe ọ bụla dijitalụ bara uru, jụọ onwe gị - kedu ka m ga-esi weta ozi bara uru ma bara uru na akụ m dijitalụ?
NDipMỌD 1. XNUMX. Lezie anya n'ịhọrọ aha faịlụ nke dijitalụ gị bara uru
Ikekwe ihe kachasị mfe bụ ịgwa Google banyere akụ dijitalụ site na iji ederede, ahịrịokwu ahịrịokwu. Ma ọ bụ onyonyo, ihe eserese ma ọ bụ vidiyo, na-amalite site na aha faịlụ kachasị elu. Ndi DSCN1618.jpg pụtara ihe ọ bụla nye gị? Eleghị anya ọ bụghị. Ma n'azụ aha faịlụ ahụ bụ foto nke ọmarịcha nwa nkịta ụlọ Britain aha ya bụ Buster - ọ dịkwa mma!
Kama nke aha faịlụ ma ọ bụ aha njirimara, gbalịa aha kachasị mma dịka, Mara mma-siberian-husky-puppy.jpg. Ugbu a, anyị ekpuchila ọtụtụ ọchụchọ na otu faịlụ dị mfe, dị mkpa. Ha gụnyere:
Mara mma nwa nkita
Ezigbo ụmụ nkịta Husky
Mara mma Siberia Husky
Ọ dị mma? Na site na idowe mkpụrụ okwu dị na aha aha ahụ dị ka onyinyo ahụ, yana ọdịnaya peeji ọ jikọtara, ị na-enwekwu ohere ịnweta ndị ọbịa ịchọta gị. Ọ dị oke egwu iji jide n'aka na isiokwu ndị ị na-eji dị na akara na ihe ọ bụla ọ bụ na ị na-egosipụta na ihe onwunwe dijitalụ. Dị nnọọ ka ihe dị mkpa na-ekpebi usoro nkebi ahịrịokwu dị mma iji akụ gị dijitalụ.
Mgbe emechara ya, nke a nwere ike ịbụ usoro dị mgbagwoju anya, mana ịmụ otu esi eji Nchịkọta Ihe Atụ nke Google nwere ike inyere gị aka ikpebi ahịrịokwu kachasị mma iji.
Ndụmọdụ 2: Jiri nkebi ahịrịokwu isiokwu gị ọzọ oyiyi ederede ntinye
Ọzọkwa kwuru na dị ka ederede alt, nke a bụ ebe ọzọ ị ga - achọ ichota ihe dijitalụ iji nye igwe na - achọpụta ihe maka akụ ya. Dịka, ederede alt gị nwere ike ịdị ka aha faịlụ gị. Ihe dị iche ebe a ịbụ na ọ kwesịrị ịdị ka nkebi ahịrịokwu a gụrụ agụ.
Golaghachi na aha faịlụ ahụ dị n'elu, anyị nwere ike iji, Mara mma Siberia Husky Puppies, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkọwakwuo, Pumụ nkịta Siberia Husky a dị mma nke ukwuu. Ndị a adịghị mkpa ịbụ ahịrịokwu zuru ezu, mana ha kwesịrị ịmara na anya mmadụ.
N'ikwu ya, ka nkenke dị nkenke ka mma. Ghaghi izere ihe akpọrọ nri, nke dị ka nke a: nkịta mara mma nkịta nkịta puppy puky puky puky husky siberian nkịta na-agba ọsọ na ahịhịa. N'ezie, enwere ohere Google nwere ike ịta gị ahụhụ maka ụdị aghụghọ ndị a.
Lee ụfọdụ ihe atụ nke alt ederede:
Ọjọọ: alt = ”“
Mma: alt = "nkịta"
Ọbụna nke ka mma: alt = “siberian husky puppies ụra”
Kachasị mma: alt = “siberian husky puppies na-ehi ụra n’elu ọcha”
Ndụmọdụ 3: Jiri ọdịnaya dị mkpa na-akwado ihe ọ bụla dijitalụ bara uru
Google na-eji ọdịnaya dị na peeji gị iji chọpụta ma ma ibe weebụ gị ọ bụ ezigbo egwuregwu na otu ahịrịokwu ọchụchọ. Nkebi ahịrịokwu isiokwu ị na-eji na akụ dijitalụ gị kwesịrị ịdị na ebe dịka isiokwu gị, isi ihe na ibe akwụkwọ. I nwekwara ike ịtụle itinye ntinye maka ihe onyonyo gị, ma ọ bụ ikekwe aha nkọwa.
Cheta, ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịkwalite ọdịnaya gị, jide n'aka na Google nwere ike iri igbe nke ibe HTML yana akụ ahụ n'onwe ya. N’aka ozo, ebugo PDF nke ederede Google n’enweghi ike igu.
Ndụmọdụ 4: Mepụta nnukwu ahụmịhe onye ọrụ
Mgbe ọ ruru ala, Google na-anwa ịmepụta ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, na-adaba na ahịrịokwu isiokwu achọrọ na nsonaazụ dị mkpa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka akụ dijitalụ gị rụọ ọrụ nke ọma maka nchọta, ị ga --emepụta ahụmịhe onye ọrụ kacha mma enwere ike. Nke a ga - enyere aka ikike nke ebe nrụọrụ weebụ gị, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọta. Dị nnọọ ka ezigbo mmadụ, Google algorithm maara ma ọ bụrụ na ibe gị na-enye ahụmịhe onye ọrụ mara mma, ma ọ bụ nke abalị.
Gịnị ka ọ pụtara inye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ?
Ihe oyiyi dị mma, dị elu - Mụta ntọala nke iji nọgide na-adị nkọ, na-egbusi ihe oyiyi na ntanetị. Nke a ga - enye onyonyo gị onu mgbe ị na - echekwa ihe onyonyo ndị ọzọ na - apụta na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, nke nwere ike ibute ọtụtụ clic.
Debe ihe onwunwe dijitalụ gị n'akụkụ elu nke ibe - Idebe ọdịnaya karịa ogige ahụ ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ile ya anya. Na mgbakwunye, onyonyo nwere ikike ịbawanye njikọ aka, na-eme ka onye na-ele ya nwee ike ịgụ otu!
Ezipụta obosara na ịdị elu maka ihe oyiyi niile - Nke a nwere ike inye aka mee ka ngwa ngwa peeji na-abawanye nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ. Nwere ike igwu egwu n'akụkụ a ntakịrị iji hụ etu nha ga-adị mma na ibe weebụ gị.
Zere iduhie ndị ọbịa gị - Tinye aha faịlụ kwesịrị ekwesị ma hụ na akụ dijitalụ dị mkpa na ibe ha. Ọ bụrụ na akụ gị dijitalụ gbasara nkịta, ka anyị tinye aha ndị na-ewu ewu ndị a ma ama iji nweta ọtụtụ okporo ụzọ.
Ọ bụ ezie na enweghị m blog nwa nkita na-enyere aka ịmalite Buster n'ime nyocha Google Search, enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a ga-enyere gị aka ịkwalite akụ dijitalụ gị!
Tags: nchọta onyonyo googleogo njikarịchaebuli ihe oyiyi
Etu aga - esi mee ka nri gị Pizza er a ere na onwe ya na ntanetị
Feb 22, 2015 n’elekere 8:50 nke abali
Ezigbo Nate - Amalitela m ịhụ uru nke ịnwe ogologo oge na nkọwa nkọwa na ihe oyiyi m. Ọ bụ usoro mgbasa ozi ọzọ dị ike ịnweta ihe onyonyo gị na-egosi na nchọta onyonyo. O yikarịrị ka onye ọrụ ahụ nwere ike pịa njikọ oyiyi ahụ wee gaa na saịtị gị.
Enwere nduzi ọ bụla banyere "nkọwa" na "nkọwa" nke ihe oyiyi ahụ? (na WordPress ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị jiri ha)
Feb 23, 2015 na 2:29 PM
Daalụ, Nate, maka ịkọwapụta ihe ndị a bara uru 😀
Feb 23, 2015 na 9:08 PM
Ndewo Ahmad! Ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ anọ ahụ a kpọtụrụ aha n’elu, ị na-agbachasị ihe onyonyo nke ọma. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịma ihe oyiyi dị, Alt Image Tag ga-agwa ha, Google na-elekwa anya na Alt Image Tag na aha ihe oyiyi maka uru SEO. Onwe m anaghi eji nkowa ma obu ihe edere ede. Ọ bụrụ na ị mejupụta mpaghara ndị ahụ, aga m akwado ịkwado mpaghara ndị ahụ maka anya mmadụ. Daalụ maka ịgụ!